Guddoomiye Dhoobo oo xilka laga qaaday ayaa sheegay in aan loo marin sifo sharci ah… – Hagaag.com
Guddoomiye Dhoobo oo xilka laga qaaday ayaa sheegay in aan loo marin sifo sharci ah…
Guddoomiyihii Baarlamaanka Puntland C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa sharci darro ku tilmaamay xil ka qaadistii maanta ay ku sameeyeen Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, kaddib markii laga keenay mooshin xil ka xayuubin ah.
Wareysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayuu ku sheegay in xil ka qaadistiisa aanu loo marin sifo sharci ah, isagoo xusay inay waxba kama jiraan tahay.
“Sifo sharci ah ayaa ku imid, sifo sharci ah ayaa ku tagayaa, qaabka iyo nidaamka ma waafaqsaneyn, xaaraan weeye waa waxba kama jiraan, mana ansaxayo, Xildhibaanada culeys baa la saaray, xalay lacag ayaa la qeybiyay oo 20-kun oo dollar ah, mana ahan sifo sharci ah oo dastuurka waafaqsan”ayuu yiri C/xakiin Dhoobo.
Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa u codeeyay mooshin laga keenay Guddoomiyaha, waxaana mooshinkaas gacanta u taagay 49 Xildhibaan, halka afar ka aamustay, iyadoo sidaas uu natiijada ku dhawaaqay Guddoomiye kuxigeenka 1aad.
Magaalada Garowe ayaa waxaa xalay ka dhacay dagaal kooban oo u dhaxeeyay Ilaalada xarunta Baarlamaanka iyo Ciidamo uu hoggaaminayay Taliyaha Booliska, waxaana dagaalkaas ku dhintay saddex ruux, halka qaar kale ku dhaawacmeen.